गर्मीमा स्वस्थ्य रहन के गर्ने ? – korea pati
May 19, 2020 Korea patiLeaveaComment on गर्मीमा स्वस्थ्य रहन के गर्ने ?
गर्मी भन्नासाथ पसिना, दुर्गन्ध, डिहाइड्रेसन, बेचैनी, आलस्यता तथा उर्जाको कमी भएजस्तो लाग्नथाल्छ । यद्यपि, हामीले केही सावधानीहरु अपनायौं भने गर्मी मौसममा पनि हामी फिट रहन सक्छौं, फुर्तिलो रहन सक्छौं, आलस्यतालाई हटाउन सक्छौं । गर्मी मौसममा खानपिनको तालमेल मिनाउन सकियो भने मौसमअनुसारको डाइटका साथै आफ्नो फिटनेस दिनचर्यालाई सन्तुलित राखियो भने हामी स्वस्थ र निरोगी रहनसक्छौं ।
गर्मीको खानपिन टिप्स
-गर्मीमा ताजा खाना खानुपर्छ र स्वस्थ रहनुपर्छ । गर्मीमा तुरुन्त पकाएको भोजन नै खानुपर्छ । कारण यो मौसममा विशेषगरी टमाटर, आलु, हरियो सागपात र दाल चाँडै बिग्रने गर्छ । गर्मी मौसममा पचाउन सजिलो हुने खानेकुरा मात्र खानुपर्छ।
-बिहान उठेको एक-डेढ घन्टाभित्र केही न केही खानुपर्छ अथवा ग्रिन टी सेवन गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म खाली पेट बस्नाले शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी हुनपुग्छ । थोरै-थोरै समयको अन्तरालमा खाने गरेमा ओवर इटिङबाट बच्न सकिन्छ । बिहानको सुरुवात मन तातो पानीमा कागतीको रस र महसित गर्नु राम्रो हुन्छ ।
-गर्मीमा चिया-कफीको सेवन कम गर्नुपर्छ । यसबाहेक जुस, आइस, दही, लस्सी, सातु, कागती-पानी, वेल सर्वत, नरिवल पानी, उखुको रसलाई आफ्नो खानपिनमा समावेश गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
-गर्मीको मौसममा घरमा ग्लुकोज, इलेकट्रोवियन, जीवनजल, पुदिना आदि राख्नुपर्छ ।
-बाहिर घामबाट फर्केपछि तुरुन्तै फ्रिजको पानी पिउनुहुँदैन । त्यसको साटो सुराही माटोको भाँडामा राखिएको पानी राम्रो हुन्छ ।
-मिठाईको बदलामा फलफूल खानुपर्छ ।
-अत्याधिक चिसो पेय पदार्थबाट टाढा रहनुपर्छ ।
-पचाउन सजिलो हुने तथा हल्का सब्जी खानुपर्छ । गाजर, टमाटर, पालकबाहेक पानीको मात्रा भएको लौका जस्ता सब्जी राम्रो हुन्छ। यी सब्जीहरूमा क्यालोरी समेत कम हुने भएकाले गर्मीसित लड्ने क्षमता पनि हुनेगर्छ ।
-गर्मीमा हिट स्ट्रोक र डिहाइड्रेसनबाट जोगिनका लागि बिहान सबेरै र साँझपख हिँडनु राम्रो हुन्छ । अहिले घर बाहिर हिँड्ने अनुकूलता नभएकाले घरभित्रै वा छतमा हिँड्न सकिन्छ ।
-अनुलोम बिलोम, कपालभाती जस्ता प्राणायाम गरौं ।
-केही क्षण ध्यानको अभ्यास गरौं ।
-योग अभ्यास गरौं ।
-केही क्षण विश्राम गरौं ।
-गर्मीमा दैनिक रूपमा कम्तीमा दिनको तीन लिटर पानी पिउनुपर्छ । व्यायाम अथवा शारीरिक अभ्यासभन्दा पहिला र पछि पनि पानी अथवा तरल पदार्थ पिउनुपर्छ ।
-खानामा सुप तथा फलफूलको मात्रा बढाउनुपर्छ । मसलदार खाना कम खानुपर्छ ।
-एकसाथ तीन भन्दा बढी फलको मिक्स जुस पिउनुहुँदैन ।
-डब्बामा बन्द भएको जुसबाट जोगिनुपर्छ । ताजा फलको जुसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
–शारीरिक सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ ।
–बिहान चिसो पानीले नुहाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
–हल्का र खुकुलो पहिरन लगाउनुपर्छ ।
–सेतो वा उज्यालो रंगको पहिरन उपयुक्त हुन्छ । अनलाइनखबरबाट
मन्दीमा गयो जापान
ईपिएस भाषा परिक्षा डिजिटल प्रबिधी मार्फत गर्न कोरियाली अधिकारीसँग छलफल
December 5, 2019 January 17, 2020
गर्मीमा स्वस्थ्य रहनको लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरु
May 28, 2020 Korea pati
June 6, 2020 Korea pati